Ururada iyo go’aan-wadaaga | Samfunnskunnskap.no
Shaqaalaha iyo shaqobixiyeyaashu labaduba waxay leeyihiin ururo u gaar ah. Ururka shaqaalaha ee ugu weyn waxa la yidhaahdaa LO, kan ugu weyn ee ururka shaqobixiyeyaasha waxa la yidhaahdaa NHO. Shaqooyinka ururadan waxa ka mid ah inay ka wada xaajoodaan mushaharka iyo waqtiga shaqada..
Markay shaqobixiyeyaasha iyo shaqaaluhu isku raacaan waxyaabaha noocan ah, waxa la sameeyaa heshiis. Heshiisyadani waxay shaqeeyaan sida caadiga ah labo sanno waxaana la yidhaa heshiis-wadajir (tarifavtale). Shaqobixiyeyaasha iyo shaqaalahaba waxa saaran waajib ah inay raacaan heshiiskan.
Urur-daneeyaha shaqaalaha waxa la yidhaahdaa ururka-xirfadlayaasha, oo Norwey shaqaale badan ayaa xubin ka ah urur noocan ah.
Xubnuhu waxay bixiyaan qadar lacag ah si ay xubin uga noqdaan ururka xirfadlayaasha.
Saamayn ku lahaanta suuqa-shaqada
Si jawi shaqo oo wanaagsan looga abuuro goobta shaqada waa inay shaqobixiyeyaasha iyo shaqaaluhuba kawada shaqeeyaan heshiisyada kala duwan. Sidaa darteed ayaa shaqooyinka noorwijiga waxa ka dhexjira saameyn ku yeelasho iyo dimuquraadiyad shirkadeed oo dhinacyo badan ah. Qof kasta oo shaqaale ah waa in la dhegeysto oo uu ka qeybqaato sidii loogu habayn lahaa xaaladiisa shaqo. Iyaga oo adeegsanaya ururkooda shaqaalaha ayey shaqaaluhu ka qeybqaadanayaan doodaha oo la siinayaan macluumaadka ku saabsan shirkada.
Shirkadaha waaweyn waxa saaran inay goobaha shaqada ku yeeshaan wax la yidhaahdo HMS oo u taagan caafimaad- bayadda – iyo ammaanka. Shaqadan waxa habeynaya oo daba soconaya qof shaqaaleha metela iyo qof hogaanka metela.
LO waa hay’adda shaqaalaha ee ugu weyn.
NHO waa hay’adda shaqo-bixiye ee ugu weyn.